OLAN’NY MPIASA: Voahitsakitsaka ny zon’ny mpiasa. | Canalnews Madagascar
Home A LA UNE OLAN’NY MPIASA: Voahitsakitsaka ny zon’ny mpiasa.
OLAN’NY MPIASA: Voahitsakitsaka ny zon’ny mpiasa.
By Nirinaoct 04, 2016, 14:13 2
Mandray anjara amin’ny kongresy iraisam-pirenena “industtriALL Global Union” momban’ny sendika i Barison RAKOTOMANGA avy ao amin’ny vondrona Sendikaly. Fihaonambe andiany faharoa izy ity ary any Rio de Janeiro ny toerana nanatontosana azy. Hitondra ny olan’ny mpiasa mianjady any amin’ny fireneny avy ireo mpandray anjara miisa 1400. Dimy andro eo ny faharetany ary amin’ny zoma ho avy izao no hifarana izany. “Antenaina fa ho voavaha ny olan’ny mpiasa eto Madagasikara aorian’ity kongresy ity ary handray fanapaha-kevitra hentitra ny fitondram-panjakana manoloana ny fanitsakitsahana ny zon’ny mpiasa”, hoy ilay solontena Malagasy.
Nafana dia nafana ny tolona sendikaly tamin’ity taona ity ary ny zon’izy ireo no notakiany tamin’izany. Nisy novalian’ny fanjakana ny fangatahan’izy ireo, tao ihany koa anefa ny fampanantenana poaka aty fotsiny. Etsy ankilany, manampy trotraka ny fanenjehana ireo mpitarika ary miafara amin’ny fisamborana mihitsy aza izany indraindray. “Voahitsakitsaka ny zon’ny mpiasa eto Madagasikara”. Ho entina mandritra ny fihaonambe avokoa izany rehetra izany.
Interview : RAKOTONIASY Jean Raymond
Previous PostTFI: Mila ovaina ny rafitra hitantanana ny toe-karena. Next PostSENDIKAN’NY FANANAN-TANY: Voakarakara ny 49,67%-n’ny taratasy famindrana lova.
2 thoughts on “OLAN’NY MPIASA: Voahitsakitsaka ny zon’ny mpiasa.”